I-Rosary yeNkululeko Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa uthetha ngayo irosari yenkululeko Imiba ebaluleke kakhulu ithathelwa ingqalelo kwimigaqo yenkolo yamaKatolika. Kule nqaku siza kukunika zonke iinkcukacha ezinxulumene nesi sihloko.
1 Ummangaliso wengxoxo yerosari
2.2 Ukuwa kwentombazana encinci
2.3 Shumayela iindaba ezilungileyo
2.4 Ukudalwa kwerosari yenkululeko
3 Inguquko yokomoya
4.1 Amaso eerosari
4.3 Ukuphela kwerosari
Ummangaliso wengxoxo yerosari
Ukuthetha ngenkululeko kuthetha ukuseka ubudlelwane benkululeko emphefumlweni. Kubantu abaninzi abakholwayo kuthetha ukufuna ukuphiliswa ngokwasemoyeni ngokukhangela iNkosi uYesu Krestu; ukuthandaza ngokholo nokuba ujonge uhlobo lwerosari kunceda ekuphuculeni imeko yethu kuThixo.
Irosari Inkululeko ibandakanya uthotho lwemithandazo, ekufuneka wonke umKatolika olungileyo ayenze ukuba unqwenela ukulufumana oloxolo; Xa kwenziwe ngale ndlela, ummangaliso wenene womoya uyafezekiswa; Kungenxa yoko le nto sifuna ukuba uhlale nathi ukuze wazi ukuba ungayenza kanjani.
Le rosari inomdla yazalwa ibulela kuBawo Moisés Larraga ngo-2002, ngokuphefumlelwa nobabalo lukaBawo waseZulwini. Lo mfundisi wayengumfundisi waseMexico ozinikele kwindlela yeNkosi esemncinci kakhulu, ngenxa yokuzinikela okwabekwa ngabazali bakhe.
Ukuzalwa irosari yenkululeko Kwenzeka emva kwesiganeko esenzeke kwidolophu yaseGuanajuato, eLeón, eMexico. Xa umbingeleli eqala ukuzibona, imeko yesohlwayo nasemva kwesiganeko senzeke kwiCathedral yabaFel 'ukholo bakaKrestu uKumkani wasePiedras Negras, eMexico.
Ukuwa kwentombazana encinci
Kuyenzeka ukuba ibhinqa eliselula lawa ngomqolo lisuka kumanqwanqwa ecawa akwindawo ephakamileyo, abo babekho bakholelwa ukuba le ntombazana ifile, kodwa kwangoko uYise Larraga wasondela kuye wathi: Akazophula thambo! Ulandelwe ngumthandazo kwaye kwimizuzu embalwa le ntombazana iphakame ingakhange ibonise monakalo.
Shumayela iindaba ezilungileyo
Emva kwalo msitho, icawa yecawa yaqala ukwamkela abathembekileyo abaninzi ababekhangela uBawo uLarraga ukuphelisa intsikelelo kunye nokuphilisa. Oku kwabangela isiphithiphithi kumagunya ezenkolo kweli kwaye ngakumbi kwindawo.
Ngo-1999, ubawo uEmiliano Tardiff, ophethe ezona nkonzo ziphambili zecawa yecawa enkulu, wadlan 'indlebe naye wamyalela ukuba ashumayele iVangeli kwilizwe lonke, kuba iNkosi yayimnike isipho sokuphilisa, ngomthandazo.
Ukudalwa kwerosari yenkululeko
Ukusukela ngala mzuzu, utata u-Larraga waqala indlela yokushumayela kwilizwe lonke, esongeza amava kunye nolwazi olwamvumela ukuba aqhubeke nokwenza i-rosari yenkululeko kunye nokuphilisa, esikwaziyo namhlanje.
Ubawo uLarrea usweleke kwiminyaka embalwa edlulileyo kodwa ilifa lakhe lahlala likhona kwizigidi zabantu abathembekileyo, abathi mihla le bathandaze le rosari njengesenzo sokholo sokufuna inkululeko yokwenyani. Ngendlela efanayo le rosari ikhule ithandwa ngabantu abathembekileyo abaguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwe-15 jikelele el mundo.
Ukuba uyalithanda eli nqaku; Yabelana ngoko kwinethiwekhi yoluntu kunye nabahlobo bakho, ungalibali ukushiya uluvo lwakho olusinceda sondle ibhlog yethu ngolwazi oluxabisekileyo; Sikushiya le khonkco ilandelayo Umthandazo woKhululwa ukuze uncedise ulwazi olunikezwe kwesi sithuba.
Kwabaninzi abakholwayo kunye nabathembekileyo bokwenyani, irosari yenkululeko imele uguquko lomoya oluthunyelwa eNkosini ngemiyalezo nangemithandazo; ngezicelo kutata wasezulwini, ke umntu ngamnye ngokwenza njalo kufuneka abeke ecaleni oku kulandelayo:
Soloko unayo irosari.
Ezi ziya kuba zizixhobo eziyimfuneko ukufezekisa ukuguqulwa kokomoya, ngokusebenzisa irosari yenkululeko. Kodwa masibone ukuba yindlela yokuthandaza ukugcwalisa yonke le nto siyicebisayo.
Ukuqala umthandazo opheleleyo, kufuneka sithi: «Egameni loYise, lonyana neloMoya oyiNgcwele. Amen ”kwaye kwenziwa uphawu lomnqamlezo. Emva koko iNdumiso 91 kufuneka iculwe emva koko kwenziwe lo mthandazo ulandelayo:
"UYesu khulula abantu bakho, ubakhulule abantu abaphethwe zizifo, ubakhulule kwintiyo, ububi, ububi kunye nokuphelelwa lukholo; sikhulule inkosi kwimpembelelo embi, khulula imixokelelwane ngale ndumiso! "
Sithandaza inkolo, kwaye emva koko siqala nge-ejaculation, kunye nokuthatha irosari ukuqala size sithi:
"Ukuba iNkosi yethu uYesu Kristu iyandikhulula, ndiya kuba noxolo kwaye ndikhululeke ngokupheleleyo ».
Emva koko sibhengeza ukuba ngubani esiza kuthandazela ishumi esithi: Ukuba iNkosi iyamkhulula (Igama lomntu) uya kukhululeka ngokwenyani. Ngokukhawuleza khumbula isicatshulwa sikaJohn 8: 36, apho iNkosi yethu uYesu Krestu ithetha ngenkululeko yokuya kutata, sikhululeke ngaphandle kwentsingiselo, sikhululekile esonweni sokufa kwaye siyasichitha.
Kuwo onke amaso erosari kufuneka ukhumbule umntu okhutshiweyo, emva koko kwenziwe izicelo ezi-3:
INkosi yiba nenceba (Igama lomntu)
UYesu uyaphilisa (Igama lomntu)
UJesús Salva (Igama lomntu).
Ukukhululwa (igama lomntu)
Ekupheleni kweshumi ngalinye, "uGloria" kufuneka athethwe ngolu hlobo lulandelayo: "Uzuko kuyise, uzuko kunyana, uzuko kumoya oyingcwele ..." Amashumi amahlanu athandazelwa umntu omnye okanye abo banqwenela ukukhulula, ngokufanayo kunokwenziwa ukucela inkululeko yethu.
Ukuqukunjelwa komthandazo weRosari yokuphilisa kwenziwa nge "Yibingelele kwiNtombikazi enguMariya", esiyaziyo sonke: "Aa Mariya, uzele lubabalo, iNkosi inawe… ”Umqondiso womnqamlezo wenziwa kwaye uthi:" Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele, amen ".
Kule rosari ekupheleni komthandazo, umbulelo unokwenziwa kuYise, kuNyana nakuMoya oyiNgcwele. Lo mthandazo ugcwele ukholo kwaye wenziwa nguTata uMoisés Larraga emva kokufumana isipho senkululeko nokuphilisa, yenze ekhaya okanye naphi na apho ufuna ukunceda abasweleyo.